मेरो जागरण मेरो जीवन भाग - २१ फेस रिडर/ ज्योतोषी - Jagaran Post
मेरो जागरण मेरो जीवन भाग – २१ फेस रिडर/ ज्योतोषी
जागरणपोस्ट ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:५५
कुरा २०५३ सालतिरको हो। सहायक स्तरको जागीरले सधैं तानतुन गरेर चलाउनु पर्ने । पढाई पनि छोड्न मन लागेको थिएन साथै अन्य व्यवसायिक तालिम र अध्ययन पनि छँदै थियो । ४६/४७ साल तिरै इलेक्ट्रोनिक काम सिकी सकेको थिएँ । धेरै दुख कष्टले खाएको जागीर छोडेर आफ्नै व्यवासाय गर्ने इच्छा भए पनि लाग्न सकेको थिइन । व्यवसाय सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि थिएन । तर सिकेको सीप त्यसै गुम्स्याएर राख्ने अवस्था पनि थिएन
निम्न र मध्यम वर्गीय हरूको पहुँचमा , टी वी , डि भि डी , डिक्स , स्टेरियो आदि पुगी सकेकोले , बिक्री मर्मतको राम्रै बजार बसि सकेको थियो ।
केही सहयोगी साथी भाईको सहयोगमा , रानीपौवा र महेन्द्रपुल दुई ठाउँमा सँगसगै जस्तो मर्मत पसल (कार्यशाला ) खोलें । अफिसको समय बाहेक आँफै खट्थें । रानीपौवामा टेलीफोनको बढी काम हुन्थ्यो भने महेन्द्रपुलमा
अन्य ठुला ठुला इलेक्ट्रोनिक सामान हरूको बढी काम आउँथ्यो । सधैंको दौडधुप कामको चाप निकै हुन्थ्यो । काम अनुसारको दाम भने वचत गर्न निकै गाह्रो थियो । यथेष्ट आम्दानी त हुन्थ्यो तर चुहावट नै धेरै । सँगै व्यवसाय गर्नेले राम्रै तरक्की गरि सकेका थिए , आफ्नो भने सोचे जस्तो
मेरो पसलको अगाडि एउटा फुटपाथे ज्योतिषीले अखडा जमाउँथ्यो
अलि अलि जडिबुटी औषधी पनि बेच्थ्यो । प्रायः कालो कपडामा हुन्थ्यो ।
चिना , हात , अनुहार हेरेर भविष्य ग्यारेन्टीका साथ बताउँछु भन्थ्यो । उ सँग हेराउने औषधि गर्ने झार्फुक गर्ने मान्छे प्रायः भै रन्थे । अरु कार्य त्यहाँ गरे पनि झारफुक भने त्यहाँ गर्दैन्थ्यो । मेरै पसलको पछाडि पट्टि गोप्य ठाउँमा गर्थ्यो । बिहानै पसल खोल्ने बेलामा नजिकका पसलेलाई टीका सिका लाई दिन्थ्यो धुप बाली दिन्थ्यो । हामीले उस्को बुहुनी गर्दिन्थ्यौं । उस्को र हाम्रो धन्धा आआफ्नै तरिकाले चल्थ्यो । साँझ
कैले काहीँ त हाम्रो भन्दा बढी कमाइ भयो भन्थ्यो ।
भदौ ताका हो , बिहानै देखि अविरल झरी पर्‍यो त्यो दिन । मान्छेको आउजाउ निकै कम भयो झरीको कारण । हाम्रो धन्धा पनि सुन्य सुन्य
थियो , उस्का पनि ग्राहक आएनन् । वरपर पसलका साथी सँगै बसेर
चिया खाँदै गफिएर बसेका थियौं । उस्को त झोला खोलेको पनि थिएन
झोला हाम्रै पसलको कुना कानीमा राख्थ्यो । हामीले चिया खाँदै गर्दा उस्लाई पनि चिया खुवायौं । त्यस्तै प्रसङ्ग चल्दा आज हजुर हरूलाई
दश दश रुपैयाँमा हेराई दिन्छु , भन्यो एक दुई जना साथीले हेराइ हाले
पनि । कसैले मिल्यो भने कसैले मिलेन भने । हेराउने क्रम चली रह्यो
वरपरका पसले साथी हरू थपिदै गए । मिलेन भन्नेलाई भोलि चिना
टिप्पणी लिएर आउनुस् भनेर आस्वस्त पार्दै गयो । साथी हरूले मलाई
पनि हेराउन कर गरे । म त हेराउन्न बरु त्यसै दश रुपैयाँ दिउँला भनें ।
त्यस्ले त्यति बेला सम्म डेड दुई सय कमाइ सकेको थियो । उस्ले त्यसै
पैसा लिन्न , म माग्ने हैन मैले गरेको भविष्य वाणी अचुक छ भनेर
फूर्ति झारी हाल्यो । त्यो भन्दा अधि मैले एक पटक मात्र हेराएको
थिएँ , स्याङ्जा मायँटारी गएर त्यहाँ देखि हेराउने मोह भङ्ग भै सकेको
थियो मलाई । पुरै वकवास जस्तो लागेर । सबैले कर गरे उस्ले पनि
१००%मिलाउँछु भनेर चुनौती दिई रह्यो । अन्तमा सर्त राखें ! म एउटै
प्रश्न राख्छु मिले सय नै दिन्छु भने , उस्ले नमिले प्रमाण दिन सके म
दुई सय दिन्छु भन्यो । साथी हरूले दुबै पक्षलाई उकेरा लाउने काम गरे ।
मेरो चिना टिप्पणी त्यहाँ उतिखेरै हुने कुरा भएन उस्ले अनुहार हेरेर
ठ्याक्कै पार्ने ठोकुवा गर्‍यो । मलाई त्यतिका माझमा मिले नमिलेको
देखिने खालको प्रश्न वा जिज्ञासा राख्नु पर्ने भयो । उस्को दुई सय र मेरो
एकसय निर्णायक लाई बुझायौँ त्यति बेला सम्म १५/२० जना जम्मा
भै सकेका थिए । घेरा बन्दी गरेर बसे । उ र म उस्तै उमेरका थियौं
उस्को जिउडाल र लवाइले गर्दा म भन्दा निकै पाको जस्तो देखिन्थ्यो
म दिन उमेरको भएको भए पनि ख्याउटे दाँत अलि छिद्रा भएकोले
बच्चै जस्तो देखिन्थे । तर पनि उस्ले मान गरेरै सम्बोधन गर्थ्यो अघि
पछि पनि ।
ल प्रश्न राख्नोस् भन्यो सबै चुप भए । मलाई उत्ति बेलै मिले /नमिलेको
प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भएकोले , ल मेरा दाँत कति छ्न् भनें , मेरो मुख खुलेको अवस्थामा १२/१४ ओटा दाँत देखिन्थे । म सामान्य अवस्था नै रहें
ओठ च्याप्प पनि पारिन । उस्ले एक छिन मेरो अनुहारमा हेर्‍यो , अनि ध्यान लाए जस्तो गर्‍यो । मेरो अनुहार कलिलै जस्तो लागेछ क्यारे उस्ले
फ्याट अठ्ठाइस ओटा देखाउनुस् भन्यो । आफ्ना दाँत कति छ्न् भन्ने
आफूलाई थाहा छँदै थियो । मैले ढुक्क साथ मिलेन फेरि एक चान्स
अझै दिन्छु भने, अरुले हुन्न भने ,अझ मैले बाहिर बाट छाम्ने छुट सहित
दिएँ । उ रातो पिरो भयो छाम्न सकेन । बरु एक पटक अगाडिका दाँत
देखाउन भन्यो देखाइ दिएँ हल्का हाँसे जस्तो गरेर । उ त्यस्तो झरीमा
पनि पसिना पसिना भै सकेको थ्यो । सयको भन्दा पनि भोलि देखि उस्को धन्धा नै चौपट हुने वाला थियो । जम्मा भएका मान्छे हरू हल्ला गर्न
शुरु गरे ! कोहीले त पहिला दिएको पैसा फिर्ता माग्न थाले । ज्योतिषी निलोकालो भयो । अर्को अप्सन माग्न पनि सकेन । झोला बोकेर हिँड्न
लाग्यो । अरुले जान दिएनन् दाँत नगनी । उ हाला भयो । मान्छे धेरै
भएर जोग लागेन भन्न थाल्यो । ठिक छ दाँत त गनेर जाऊ जे भयो भयो
भनेर मैले मुख खोलें माथिल्लो लहर बाट गन्दै गएको , माथिल्लै
लहरमा १८ पुर्‍यायो उसैले । त्यस पछि गन्ने वातावरण नै भएन हल्लाले । भोलिपल्ट देखि उस्को दुकान बन्द भयो । त्यस्को १५/२० दिन पछि
नराम्रो खबर सुनाए ! अत्याधिक रक्सी पिएको कारण ज्यानै गएछ ।
यो पनि पढ्नुहोस – मेरो जागरण मेरो जीवन भाग -२० (परशुराम)
साथै, तपाईंसंग पनि यस्तै अनुभूति या लेख्दै गरेका रचना छन भने कृपयाँ jagaranpost.com@gmail.com